Haddii aad ku beddesho batterigaaga iPhone mid aan asal ahayn, waxaad waayi doontaa macluumaadkaaga caafimaad | Wararka IPhone
Haddii aad ku beddesho batteriga iPhone-kaaga mid aan asal ahayn, waxaad waayi doontaa macluumaadkeeda caafimaad
Toni Cortés | | Qalabka IPhone, iPhone Xr, iPhone Xs, dhowr
Apple waxay hawlgelisay nidaam ku jira IOS si "loogu taliyo" isticmaalaha inuu isticmaalo baytariyada asalka ah markaad go'aansato inaad bedesho midka kujira iPhone-kaaga.
Dabcan kuma qasbi karaan, laakiin waa inaad ogaataa haddii aad batariga u beddesho mid aan Apple ahayn, waxaad waayi doontaa macluumaadka ay iOS ku siiso ee ku saabsan caafimaadka qaybtaas. Wiilasha iFixit Iyaga uun baa soo ogaaday, haddana waanu kuu sharraxaynaa.
Kooxda caanka ah ee farsamayaqaanada ka iFixit, ayaa lagu ogaaday tan cusub iPhone XS, iPhone XR iyo iPhone XS Max leeyihiin aqoonsi batteriga asalka ah. Haddii aad batteriga ku beddesho qof aan Apple ahayn ama mid ka mid ah SAT-yada la oggol yahay, waxaad heli doontaa farriin sheegaysa in batterigu u baahan yahay in la dayactiro.
Lagu hubiyey labadaba macruufka 12 iyo iOS 13 betas, iyo Haddii aad garatid in bateriga uusan rasmi ahayn, fadlan jooji adeegsiga caafimaadka batteriga, qarinaya macluumaadkaaga. Digniinta ayaa leh:
Fariin muhiim ah oo ka socota bateriga. IPhone-kan lama xaqiijin karo inuu leeyahay batari Apple dhab ah. Macluumaadka caafimaadka ayaan laga heli karin baytarigan. '
iFixit waxay soo werineysaa in fariintani aysan umuuqan inay saameyn ku yeelanayso howlaha batteriga, laakiin dabcan, maahan wax lagu qoslo inaad lumiso macluumaadka nolosha faa iidada leh ee iOS ay hada ku siiso
Kanaalka Youtube Farshaxanka Dayactirka daahfuray sababta. Sababta ogaanshaha waa qalab Texas Instruments chip oo lagu rakibay baytariga, taas oo siinaysa calaamadaha sugida iyo awooda iyo xogta heerkulka.
Tan, shirkaddu waxay rabtaa inay kaa horjoogsato inaad aado dukaanka xaafaddaada oo aad ugu beddesho qiimo wanaagsan. Wuxuu rabaa inaad tagto xarun rasmi ah, adoo bixinaya waxbadan, sida iska cad. Apple hubaal wuxuu ku doodi doonaa su'aalaha amniga ee ku saabsan baytariyada bararsan, iwm.
Tani waxay xusuusinaysaa arrinta caanka ah ee qaladka 53 ee ka muuqatay iPhone 6 markii aad badashay badhanka guriga mid aan rasmi ahayn. Apple wuxuu gaashaanka u daruuray isagoo leh waa ilaalin nabadgelyo si looga fogaado waxyeelo ka timaadda qaybaha saddexaad. Taasi waxay ahayd caano aad u xun, maaddaama qaladku xannibay taleefankaaga. Si kastaba ha noqotee, ka dib qayladii dadweynaha, Apple ayaa sii daayay cusbooneysiin iOS ah oo la joojiyay.
Shirkadda ayaa cudurdaar ka bixisay iyada oo leh shilka noocan oo kale ah qaladka 53 awgood wuxuu ahaan lahaa kaliya tijaabo warshad, iyo in aysan waligeed saameyn ku yeelan aaladaha macaamiisha. Markan waxaad si fudud u luminaysaa macluumaadkaaga caafimaad haddii aan la ogaan cilad-xumada. Marka shirkadaha bateriga soo saarayaasha ayaa hadda gelin kara baytariyada ...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Haddii aad ku beddesho batteriga iPhone-kaaga mid aan asal ahayn, waxaad waayi doontaa macluumaadkeeda caafimaad
In ay hadda ogaadeen inay been tahay, waxaan haystay batari aan rasmi ahayn muddo 1 sano ah waana horeba waan u arkay, kaalay, wax badan kuma kacayso in la arko
Ku jawaab JoCo
Waxaan ku noolahay Venezuela adiguna ma heli kartid baytariyada asalka ah, taasi waxay ahayd kiiskeyga, waxaan u geliyay batari aan rasmi ahayn iPhone-kayga markii aan isku dayay inaan sameeyo cusbooneysiinta, batteriga ima aqoonsaneyn, iphone-kayguna waa iga tagay isagoo aan shaqeynayn, shaashadda shaxanka isku xirka iTunes.
Ku jawaab Rosa Azcárate
Apple waxay bilaabi doontaa iPad-ka laaban karo marka hore, iPhone wixii ka dambeeya
Ciyaarta abaalmarinta ku guuleystay Safarka waxaa hadda laga heli karaa App Store